एकपछी अर्को सफल गित पस्किँदै गायिका साबित्री के.सी. (हेर्नुहोस भिडियो) – USNEPALNEWS.COM
एकपछी अर्को सफल गित पस्किँदै गायिका साबित्री के.सी. (हेर्नुहोस भिडियो)
by यूस नेपाल न्युज November 12, 2017
महेश नेपाल, काठ्माण्डौ । एक फरक कोशेली सांगितिक बजारमा आएको छ । त्यो हो लोकदोहोरी गित ‘मेरी मायाँलाई’ । साबित्री के.सी. को प्रस्तुतीमा बजारमा आएको यस गितमा नवराज घोरासैने र सावित्री के.सी.को आवाज रहेको छ । निकै राम्रो चर्चामा रहेका गायक तथा शब्द सर्जक प्रकाश पुरिको मीठो शब्दमा गायिका साबित्रीले लय भरेकी हुन ।
मिलन फिलिम्स प्रालिको प्रस्तुतिको रुपमा गित बजारमा आएको हो । धेरै गितहरु पस्किसकेकी गायिका के.सी.को यो पछील्लो गितको म्युजिक भिडियो यस्तो छ ।
by यूस नेपाल न्युज	 July 20, 2018
भारतले अनाबश्यक रुची नदेखाउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ:-नेता श्रेष्ठ
दुरगामीअसर पार्ने कुनै काम नगर्न देउवालाई ओलीको चेतावनी
by यूस नेपाल न्युज	 December 17, 2017